အရေးတျောပုံအောငျမွငျဖို့ ကွာမွငျ့နရေတဲ့ အကွောငျးအရငျးကို စိတျမကောငျးစှာပွောပွလာတဲ့ လူရှငျတျော တိုငျးကြျော - Khitamyin
ပွညျသူခဈြဟာသလူရှငျတျောတဈယောကျဖွဈတဲ့ တိုငျးကြျောလို့ဆိုလိုကျတာနဲ့ ဟား(၅)ကောငျ ညီအကိုတှခေျေါကွတဲ့ စောကျမှေး ဆိုတဲ့ စပျဖွဲဖွဲမကျြနှာလေး ပွေးမွငျမိမှာ အမှနျပါပဲ။ ဟား(၅)အဖှဲ့ရဲ့ ခေါငျးဆောငျးတဈဦးဖွဈပွီး မိမိတို့လူရှငျတျောအဖှဲ့ကို တဈညီတဈညှတျထဲရှိနစေဖေို့ ကိုယျတိုငျရှဆေ့ောငျလမျးပွကောငျးသူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။
ဟား(၅)အဖှဲ့ကတော့ လကျရှိပရိတျသတျတှကွေားမှာ ပွောစမှတျပွုနရေတဲ့ ဟာသလူရှငျတျောအဖှဲ့ပဲဖွဈပါတယျ။တောထဲမှာ မိမိတို့နထေိုငျရပုံတှကေို ပရိတျသတျတှကေို ခပြွလရှေိ့ပွီး ဇှဲမလြော့ပဲ ဆကျလကျတိုကျပှဲဝငျတျောလှနျကွဖို့ မကွာခဏ တိုကျတှနျးလရှေိ့ပါတယျ။
ညီအကိုရငျးကဲ့သို့ ခဈြခငျကွတဲ့ ဟား ၅ကောငျညီအကိုတှကေတော့ အာဏာရှငျကို ငွိမျးခမျြးစှာဆန်ဒပွခဲ့တုနျးကလညျး အတူတူဖွဈပွီး လှတျမွောကျနယျမွမှောလညျး ညီအကိုတှေ အတူတူပဲ သငျတနျးတကျရောကျလကျြရှိကွကွောငျး လူမှုကှနျယကျကတဆငျ့ သိရပါတယျ။ယနမှေ့ာတော့ ပွညျသူတှလေိုခငျြနကွေတဲ့ အရေးတျောပုံအောငျမွငျရေး ကွာမွငျ့နရေတဲ့ အကွောငျးကို ယခုလို ရေးသားဖျောပွလာခဲ့ပါတယျ။
“ကြှနျတေျာ့ အနာဂါတျ . . . . …ခငျဗြား အနာဂါတျ . .. …..ကြှနျတေျာ့ မိသားစု အနာဂါတျ …. ..ခငျဗြား မိသားစု အနာဂါတျ …….တိုငျးပွညျ မှာ ရှိတဲ့ မိသားစုအားလုံးရဲ့အနာဂါတျတှေ ဖကျြစီး လုယူ ခံလိုကျရတာ တောငျ တခြို့ မသိခငျြယောငျဆောငျ နကွေလို့ကြှနျတျော တို့ အောငျပှဲက ကွာသငျ့ဘဲ ကွာနတော . .”ဆိုပွီး စိတျမကောငျးစှာနဲ့ အာဏာရှငျအမွဈပွတျတျောလှနျရေးအောငျပှဲ အလှမျးဝေးနရေတဲ့အကွောငျး ရေးသားလာခဲ့ပါတယျ။
အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ဖို့ ကြာမြင့်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို စိတ်မကောင်းစွာပြောပြလာတဲ့ လူရွှင်တော် တိုင်းကျော်
ပြည်သူချစ်ဟာသလူရွှင်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ တိုင်းကျော်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဟား(၅)ကောင် ညီအကိုတွေခေါ်ကြတဲ့ စောက်မှေး ဆိုတဲ့ စပ်ဖြဲဖြဲမျက်နှာလေး ပြေးမြင်မိမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဟား(၅)အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မိမိတို့လူရွှင်တော်အဖွဲ့ကို တစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲရှိနေစေဖို့ ကိုယ်တိုင်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြကောင်းသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဟား(၅)အဖွဲ့ကတော့ လက်ရှိပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ ပြောစမှတ်ပြုနေရတဲ့ ဟာသလူရွှင်တော်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တောထဲမှာ မိမိတို့နေထိုင်ရပုံတွေကို ပရိတ်သတ်တွေကို ချပြလေ့ရှိပြီး ဇွဲမလျော့ပဲ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်တော်လှန်ကြဖို့ မကြာခဏ တိုက်တွန်းလေ့ရှိပါတယ်။
ညီအကိုရင်းကဲ့သို့ ချစ်ခင်ကြတဲ့ ဟား ၅ကောင်ညီအကိုတွေကတော့ အာဏာရှင်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့တုန်းကလည်း အတူတူဖြစ်ပြီး လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာလည်း ညီအကိုတွေ အတူတူပဲ သင်တန်းတက်ရောက်လျက်ရှိကြကြောင်း လူမှုကွန်ယက်ကတဆင့် သိရပါတယ်။ယနေ့မှာတော့ ပြည်သူတွေလိုချင်နေကြတဲ့ အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ရေး ကြာမြင့်နေရတဲ့ အကြောင်းကို ယခုလို ရေးသားဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော့် အနာဂါတ် . . . . …ခင်ဗျား အနာဂါတ် . .. …..ကျွန်တော့် မိသားစု အနာဂါတ် …. ..ခင်ဗျား မိသားစု အနာဂါတ် …….တိုင်းပြည် မှာ ရှိတဲ့ မိသားစုအားလုံးရဲ့အနာဂါတ်တွေ ဖျက်စီး လုယူ ခံလိုက်ရတာ တောင် တချို့ မသိချင်ယောင်ဆောင် နေကြလို့ကျွန်တော် တို့ အောင်ပွဲက ကြာသင့်ဘဲ ကြာနေတာ . .”ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ အာဏာရှင်အမြစ်ပြတ်တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲ အလှမ်းဝေးနေရတဲ့အကြောင်း ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။